Shirkadda Hass Petroleum Oo lacag ka badan $190 Million Ku Dhisaysa Dhismaha Ugu Dheer Afrika
Shirkadda Hass Group oo ah shirkad ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed ayaa magaalada Nairobi ka dhisaysa dhismaha ugu dheer afrika.
dhismahan oo ay ku baxayso lacag dhan 20billon oo kenya shilling ah una dhiganta $194.837 million oo doolar ayaa waxaa fulinaysa shirkad laga leeyahay dalka China oo la yiraahdo China state construction engineering corporation (CSCEC).
Dhismahan ayaa waxa uu gaaraya dherer ahaan 300 oo meter waxaana uu ka koobnaan doonaa 67 dabaq kaas oo ka dheer dhismaha hadda ugu dheer Afrika oo ku yaalla dalka koonfur afrika. Carlton Centre oo ah dhismaha hadda ugu dheer Afrika waxa uu ka koobanyahay 50 dabaq halka dherer ahaanna uu gaarayo 223 meter.
Aasaaaska Dhismahan Hass Tower ayaa lagu wadaa in uu bilowdo bisha April ee Sanadkan, kadib marka si sax ah xarigga looga jaro mashruucaan.
Hass tower ayaa albaabada loo furi doona sanadka 2020-ka waxa uuna ka koobnaan doonaa xafiisyo, hotel, iyo goobo lagu nasto.
“ Ma ahayn wax sahlan. CSCEC waxa ay la tartantay shirkado dhowr ah oo ay ka mid yihiin shirkado laga leeyahay dalka turkiga, wadamada yurub iyo kuwa kale oo Chinese ah, CSCEC ayaana ugu dambayn ku guulaysatay heshiiska fulinta dhismahan, waxa ayna tani sare u qaadaysaa xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya kenya iyo China” ayuu yiri Abdinasir Ali Hassan oo ah gudoomiyaha shirkadda hass.
CSEC ayaa ka mid ah shirkadaha ugu waayn dunida ee dhismaha, waxa ayna fulisaa dhismooyin isku dhaf ah, waxa ay ka shaqaysaa guriyaynta, horumarinta iyo maalgashiga hantida maguurtada ah, dhismaha iyo maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fulinta qandaraasyada caalamiga ah.
“Tani waxa ay noqon doontaa dhismaha ugu dheer afrika, taa oo summad u noqon doonta Kenya, waan hubaa in tani ay gobolka u horseedi doonto horumar, dhaqaalahana uu kordhi doono, sidoo kale waxa ay soo jiidan doontaa maalgashadayaal caalami ah. CSCES waa u muhiim qandaraakaan waana uga mahadcelinaynaa in ay noo doortaan in aan fulino dhismahan” ayuu yiri Li Mingguang oo ah madaxweyne ku xigeenka dhanka howlaha ee shirkadda CSCES.